Wararka Maanta: Jimco, Dec 21, 2012-Urur-siyaasadeedkii Shanaad oo Puntland looga dhawaaqay iyo Wakhtigii loo qabtay furashada ururada oo gabagabo ku dhow
Urur siyaasadeedkii ugu horeeyey ee Puntland lagaga dhawaaqay waxaa ku bahoobay in ka badan 200 oo mas'uul oo kamid ah xukuumadda xiligan talada haysa, islamarkaana uu ku jiro madaxweyne Faroole, waxaana loo bixiyey magaca HORSEED.
Ururkii midkaas xigey oo isaga loogu wanqalay magaca UGUB, waxaa looga dhawaaqay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana hormuud ka ah gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag Maxamed Siciid Nuur Dabeyl.
Dhowr beri kadib furitaanka ururka UGUB waxaa isla magaalada Boosaaso ka furmay ururkii 3-aad, kaasoo uu magaciisu yahay Hor-cad (Horumar iyo Cadaalad), waana urur mucaarid ah sida ay siyaasiyiinta hoggaanka u ahi sheegeen.
Muddo hadda 9 beri laga joogo ayaa waxaa urur-siyaasadeedkii 4aad laga furay magaalada Boosaaso, ururkan ayaa waxaa hogaamiye u ah Dr. Saadiq Eenow oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee caanka ah, waxaana xubno ka ah aqoonyahano kale iyo ganacsato fara badan.
Xalay ayaa ururkii ugu danbeeyey lagaga dhawaaqay magaala madaxda Puntland ee Garoowe ahna xarunta gobolka Nugaal, ururkan oo magaciisu yahay GAHAYR waxaa laga soo gaabiyey (Golaha Aqoonta iyo Horumarinta ee asaaska Yoolka Runta).
Saaxada siyaasadda ee Puntland ayaa xiligan ah mid xamaasadeysan, iyadoo ay muddo 10 beri ahi ka harsan tahay wakhtigii ay horay gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland u shaaciyeen in furashada ururada siyaasaddu ay ku egtahay.
Ururada siyaasadda ee Puntland ayaa ku tartami doona doorashooyinka goleyaasha deegaanka, waxaana 3-da urur ee ugu codadka bataa ay noqon doonaan axsaabta rasmiga ah ee hogaamin doona siyaasadda Puntland.